ရန်ကင်းတောင်ဆရာတော် ဦးဇောတိကသည် ပုသိမ်ကြီးမြို့ ရန်ကင်းတောင်ဥယျာဉ် ပရိယတ္တိစာသင်တိုက်၏ ပဓာနနာယက ဆရာတော် တစ်ပါးဖြစ်သည်။ ဆရာတော်သည် M.A(Sri Lanka), Ph.D(Thesis) ဘွဲ့ရရှိထားပြီး ပြည်ပနိုင်ငံများမှ ဖိတ်ကြား သော ‘ဘာသာပေါင်းစုံ ညီညွတ်ရေး ဆွေးနွေးပွဲ’များသို့လည်း အခါအားလျော်စွာ[Read More…]
May 30, 2016 — Interview
“အပြု သဘောဆောင်သော အမျိုးသားရေး စိတ်ဓာတ်က ကိုယ်နဲ့မတူသော သူတွေကို ချီးမြှောက်ခြင်းအားဖြင့် ကိုယ့်အမျိုးဂုဏ် ဇာတိဂုဏ်ကို မြှင့်တတ်အောင်လုပ်တယ်။” (အလ်ဟဂ်ျ ဦးအေးလွင်)
. RFA-ဆရာဦးအေးလွင် မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျ . UAL-မင်္ဂလာပါ RFA-ဆရာပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ ဗမာပြည်မှာ အစိုးရသစ်လည်းပြောင်းလာပြီ ဒါပေမယ့် အစိုးရဟောင်းလက်ထပ်က ပြဿနာအ ချို့ကလည်း ကျန်ခဲ့သေးတယ်။ အထူးသဖြင့်၂၀၁၂ ခုနှစ်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ် ပြဿနာပေါ့ ဆရာ ရယ်[Read More…]
“ငြိမ်းချမ်း၊ တည်ငြိမ်ရေးရအောင် လုပ်သွားချင်ပါတယ်” (ဒု-သမ္မတလောင်း ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူ အင်တာဗျူး)
နေပြည်တော် (Myanmar Now) – ကြာသပတေးနေ့က အမျိုးသားလွှတ်တော်တွင် ဒုသမ္မတလောင်းတစ်ဦးအဖြစ် အမည်တင်သွင်းခြင်း ခံရသူ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ကိုယ်စားလှယ် ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူသည် တပ်မတော်တွင် နှစ်ပေါင်း ၂ဝ ကျော် တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးနောက် အရပ်ဘက် ဌာနဆိုင်ရာ[Read More…]
March 10, 2016 — Interview